China 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole fekitori nevatengesi | Hailun Nyowani Zvinyorwa
Chigadzirwa Chigadzirwa: 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Molecular Kurema: 116.14
Chitarisiko uye zvivakwa: pfumbu chena upfu
Kuwandisa: 2.09 g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka: > 300 ° C (yakavhenekerwa)
Flash poindi: 75.5 ° C
Steam kumanikidza: 0.312mmhg pa25 ° C
Shandisa: Sezvo mishonga uye mishonga yezvipembenene iri pakati, Inogona kushandiswa sechiwedzera chebhokisi
peni inki, girisi uye antioxidant
chena kana pfumbu hupfu
Kana 3-amino-5-mercapto-1,2 yakafemerwa, 4-triazole, ndapota fambisa murwere kumhepo nyowani; kana ukasangana neganda, bvisa mbatya dzakasviba uye geza ganda zvakanaka nemvura ine sipo nemvura. Kana iwe uchinzwa kusagadzikana, tsvaga kuraira kwekurapa; kana uine ziso rakajeka, patsanura maziso, sukurudza nemvura inoyerera kana saline yakajairwa, uye tsvaga zano rekurapa nekukasika; kana ukamwa, gargle nekukasira, usakurudzira kurutsa, uye tsvaga zano rekurapa nekukasika.
Iyo inoshandiswa kugadzirira fotoresist yekuchenesa mhinduro
Mune yakajairwa LED uye semiconductor yekugadzira maitiro, iyo maski yefotoresist inoumbwa pamusoro pezvimwe zvinhu, uye pateni inoendeswa mushure mekuratidzwa. Mushure mekuwana iyo inodikanwa pateni, iyo yakasara photoresist inoda kubviswa pamberi peinotevera maitiro. Mukuita uku, zvinodikanwa kuti ubvise zvachose zvisina basa photoresist pasina kukanganisa chero substrate. Parizvino, photoresist yekuchenesa mhinduro inowanzo sanganisira polar organic solvent, yakasimba alkali uye / kana mvura, nezvimwe. Iyo photoresist pane iyo semiconductor wafer inogona kubviswa nekunyudza iyo semiconductor chip mune yekuchenesa mvura kana kugeza iyo semiconductor chip ine yekuchenesa mvura .
Rudzi rutsva rwefotoresist yekuchenesa mhinduro yakagadziriswa, inova isiri-yemvura yakadzika etching sipo. Iyo ine: doro amine, 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole uye cosolvent. Rudzi urwu rwefresresist yekuchenesa mhinduro inogona kushandiswa kubvisa photoresist muLED uye semiconductor. Panguva imwecheteyo, haina kurwisa kune substrate, senge simbi aluminium. Zvakare, iyo system ine yakasimba mvura kuramba uye inowedzera mashandiro ayo hwindo. Iyo ine yakanaka yekushandisa tarisiro muminda ye LED uye semiconductor chip yekuchenesa.
Pashure: 3-Amino-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid
Zvadaro: Aminoguanidine Bicarbonate